Global Voices teny Malagasy » #SomosTodosLorena: Fihetsiky Ny Governemanta Manoloana Ny Fanavakavaham-bolokoditra Nitranga Tany An-tsekoly · Global Voices teny Malagasy » Print
#SomosTodosLorena: Fihetsiky Ny Governemanta Manoloana Ny Fanavakavaham-bolokoditra Nitranga Tany An-tsekoly
Voadika ny 13 Jona 2015 3:37 GMT 1	 · Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika (fr) i Jean Saint-Dizier, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanabeazana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
“Hajao ny zanakay. Tokony hanana sekoly fianarana mahasalama i Lorena. Lorena avokoa izahay” Fanentanana ho fanohanana an'i Lorena ao amin'ny pejy Preta e Acadêmica (Mainty sady Mpianatra) Sary: Facebook Preta e Acadêmica)
Raha namboraka taminy i Lorena, zanany vavy 12 taona, fa lasibatry ny ompam-panavakavahana tany am-pianarana ary tsy mba nahatsiaro tena ho voakasik'izany mihitsy ny fandraharahana ao an-tsekoly, dia namoaka ny alahelony rehetra tao amin'ny Facebook i Camila dos Santos Reis. Efa notaterin'ny Global Voices  ny tantara nitranga tao amin'ny sekolim-panjakana Sao Bernardo do Campo, ao São Paulo.
Rehefa avy namakivaky ny tambajotra sosialy ka mihoatra ny 75 000 ireo nizara ny lahatsoratra ary mihoatra ny 100.000 ny nanao “like”- dia tonga tany am-pelatanan'ny Vaomieran'ny Zon'olombelona sy ny Vitsy an'isa na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) ao amin'ny Antenimieram-pirenena ihany koa ny lahatsoratra .
Tamin'ny fanambarana  nosoniavin'ny filohan'ny vaomiera, ny solombavambahoaka Paulo Pimenta, manameloka izany asa fanavakavaham-bolokoditra izany ny CDHM :
Iray amin'ireo endrika mahatsiravina isehoan'ny herisetra mihatra amin'ny olombelona ny fanavakavahana ara-poko. Misy antony matoa ny Lalàm-panorenana mamaritra izany ho toy ny heloka bevava tsy afaky ny onitra solon-tsazy sy tsy azo anaovana fanalefahan-tsazy. Raha zaza no lasibatra, tsy misy ny voambolana hamaritana ny fitondran-tena tahaka izany.
Ankoatra izany, manipika ny lahatsoratra fa tokony hohadihadian'ny Filan-kevi-piarovana na ny Conselho Tutelar-n'ny sekoly ireo nahavita ny heloka :
Tsy ny hampianatra ny fitovian-jo ihany no adidin'ny sekoly fa hitantana koa ireo tranga fanitsakitsahana ny fitsipika rehefa mitranga ao amin'izy ireo izany. Raha tsy izany dia misy ny firaisana tsikombakomba. Ary arakaraky ny toe-draharaha manokana, mety ho heloka bevava ihany koa izany.
Ambaratongan'andraikitra hafa ny an'ireo nahavita heloka. Raha dinihina ireo teny natao tamin'i Lorena, nanao fandikan-dalàna mitovy amin'ny fanavakavahana ny mpiara-mianatra aminy, raha 12 taona na mihoatra. Nanaiky ny nataony mihitsy ny iray tamin'izy ireo, raha jerena ny lahatsoratra nivoaka, izany hoe “tena mpanavakavaka hiringiriny”: “Rehefa te-ho mpanavakavaka aho, dia tena mpanavakavaka, mazava aminao? “. Misy indrindra ny fepetra ara-tsosialy sy ara-pampianarana amin'izany, izay tokony ampiharina fa raha tsy izany dia manao fitondran-tena meloka mety iharan'ny lalànan'ny heloka bevava ny adolantsento iray. Ary anisan'ny fihetsika melohin'ny lalànantsika sy ny Lalàmpanorenana indrindra ny fanavakavahana.
Ny tohin'ny #SomosTodosLorena (Lorena Avokoa Isika Rehetra)
Efa niresaka ny lohahevitra tamin'ny lahateniny  tamin'ny 13 Mey, tsingerintaonan'ny fanafoanana ny fanandevozana tao Brezila tamin'ny taona 1888 ny minisitry ny fampianarana Renato Janine Ribeiro. Tamin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny habaky ny Minisiteran'ny Fampianarana, nanipika ny minisitra fa ilaina ny manorina sekoly “tafahoatra ny fanavakavahana” ary nanampy izy hoe :
Misarika ny sainay amin'ny fisian'ny fanamby hanorina sekoly tsy misy fanavakavahana na endrika hafa fitsarana an-tendrony ny zava-mitranga maneho fisian'ny fitsarana an-tendrony ara-poko eo amin'ny ankizy sy ny tanora – tahaka ny tranga vao haingana tao amin'ny sekoly iray tao Sao Bernardo no Campo (SP). Tokony hahatsiaro ho tompon'andraikitra amin'ny famongorana ny fanavakavahana sy ny fitsarana an-tendrony ao amin'ny sekolintsika ny mpanabe rehetra, avy amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny Federasiona (Naoty: Brezila dia repoblika federaly). Ny tanjon'izany dia ny hanova ny tontolom-pianarana ho sehatra hoan'ny rehetra, ka iaraha-mifarimbona ny fandehan'ny fianarana ary omena lanja ny fahasamihafan'ny olombelona.
Naneho hevitra mikasika ny tantara tao amin'ny pejy Facebook-ny manokana  ihany koa Janine Ribeiro.
Raha miaiky ny maha zava-dehibe ny raharaha ireo fanambarana ofisialy rehetra avy amin'ny governemanta, miezaka tsy miraharaha ireo zava-mitranga ny Sekreteram-panjakana misahana ny Fanabeazana ao Sao Paulo. Araka ny tatitra nivoaka tao amin'ny habaky ny IG , naneho hevitra hafa izy izay milaza fa i Lorena mihitsy no nangataka mba hiova sekoly mba hiaraka aminy namany ary i Lorena no nanao herisetra tamin'ny namany tao am-pianarana, izay niteraka korontana avy eo. Nandà izany ny renin'ny zaza.
Araka ny tatitry ny IG ihany, nanakatona ny raharaha ho toy ny “adin'ankizy” ny talem-paritry ny Fitantanana ny Fampianarana ao São Bernardo do Campo, Suzana Dechechi Aparecida de Oliveira, ary nanameloka an'i Camila ho mampidera loatra ny zanany vavy (ao amin'ny haino aman-jery).
Nilaza tamin'ny Global Voices i Camila fa nijanona nianatra tao amin'io sekoly io ihany i Lorena fa tsy niova kilasy hafa. Araka ny filazany, na dia efa nanadino ny zava-nitranga aza ny zanany vavy, mbola manohy manaraka fitsaboana any amin'ny psikôlôgy izy.
Nanambara ny fahitalavitra ao an-toerana, TV Berno ao São Bernardo fa tokony hamoaka fanambarana  ny Filan-kevim-piarovana na Conselho Tutelar afaka andro vitsivitsy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/13/70858/
 Global Voices: https://fr.globalvoicesonline.org/2015/06/02/186617/
 ny lahatsoratra: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834302826663581&set=a.115386781888526.22647.100002516152882&type=1&pnref=story
 lohahevitra tamin'ny lahateniny: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21297
 pejy Facebook-ny manokana: https://www.facebook.com/renato.janineribeiro/posts/1082397278441734
 tao amin'ny habaky ny IG: http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2015-05-17/acusacao-de-racismo-em-escola-chega-ao-ministerio-da-educacao.html
 hamoaka fanambarana: http://cotidiano.tvberno.com.br/caso-de-racismo-em-escola-estadual-de-sao-bernardo-chega-ao-ministerio-da-educacao-13433/